Umoya Wezimboni Melana Nendawo Ephakeme Yokumisa Ngokusheshisa China Manufacturer
Incazelo:I-PVC High Speed ​​Belt Stacking Door,I-Pvc Ibhande Eliqinile Ligcwalise I-Door,Ukufakwa kwesigxobo sezintambo
Home > Imikhiqizo > Isango Eliphakeme Eliphakeme > Isivinini esiphezulu se-Stacking Door > Umoya Wezimboni Melana Nendawo Ephakeme Yokumisa Ngokusheshisa
Umoya Wezimboni Melana Nendawo Ephakeme Yokumisa Ngokusheshisa
I-Model No.: HF-J262
I-Port: Shenzhen Port,Guangzhou Port
Igalaji eliPhezulu lokuPhezulu lokuPhezulu
T he okusheshayo emakhiyubhi umnyango has imisebenzi ehlukahlukene ezifana ukushisa ukulondolozwa, ukulondolozwa abandayo, ubufakazi isinambuzane, wumoya, dustproof kanye umakhalekhukhwini. Ikwazi ukuhlangabezana nokusebenza okusebenza kahle nokuhlanza ama-workshops, ukugcina amandla nokuthuthukisa isimo sezulu. Ukuvula nokuvala okuzenzakalelayo okusheshayo okukhulu, ngcono ukusebenza komsebenzi kanye nekhwalithi yemvelo. Iminyango esheshayo iminyango ifaneleka eminyango emikhulu futhi ingakwazi ukumelana nokuvinjelwa kwemimoya engaphezu kwezingu-10.
---- Amaphuzu ethu okugqamile:
Ukuvula okusheshayo: yonke iminyango yokuvala okusheshayo idinga ukuvulwa masinyane ukuze kuqinisekiswe ukuthi kushesha futhi kusebenza kahle nokugcina amandla.
Vula umnyango ukuma futhi ugcine iminyango esheshayo ye-shutter evulekile ukuzwa ukuqonda kusho ukuthi inqubo yokuvala i-cube. Nansi into ehambayo noma ingxenye yokushayisana okuncane: ukusetshenziswa kokuphepha.
Ukumelana nomthelela: Uma amasango e-shutter esheshayo ahlasela noma aphikisana, izinhlelo zokuzulazula okuzenzakalelayo kanye nedivayisi yokusetha kabusha okuzenzakalelayo kuyoba nomthelela emnyango emva komthelela ongafuni amathuluzi akhethekile okubuyisela isimo sokusebenza ngesikhathi esifushane.
Ukuthenjelwa: abashayeli abasha fast kumele babe izici kagesi kanye manual ukuqinisekisa ukuthi ngesandla angakwazi ngesandla.
Isebenzisa imishini yamagatsha kagesi e-Taiwan SNMA, umthombo wamandla 220V, amandla angu-0.75kw, ama-shoulder bearing bearing S4 kakhulu.
2) Uhlelo olulawulwa ngogesi
Usebenzisa ibhokisi lokulawula lokugqugquzela ukusebenza okuphezulu laseDenmark Denver, ekusethini iphethini lokulawula i-vector, ukucaciswa kokulawula kuphezulu; Umshini wokushintsha amavolumu ephezulu (150% 1HZ), i-PLC ihlanganisa, inokusebenza okuphezulu, ukwethenjwa okuphindaphindiwe, ukuzinza okuphezulu, izici eziphakeme, indawo ephakeme ngokunembile. Ngesikhathi esifanayo isebenzisa ubuchwepheshe bokulawula ukuguqulwa kokuphindaphindiwe, kunesiqalo esithambile, ukuyeka kancane ukusebenza, ukuqinisekiswa komzimba womzimba wokuqinisekisa ukukhushulwa kwenkonzo yokuphila.
3) Isivinini sokusebenza
Isivinini sokuvula esingu-0.4-0.8m / s (adjustable). Ukuvula imvamisa ephezulu (1000-1500 / ngosuku)
4) Idivayisi yokuphepha
Ingxenye engezansi i-doorframe ifaka ukuvikelwa kwe-photoelectricity ye-photoelectricity eyodwa, ngaphansi komzimba wesango kuhamba lapho umuntu nenento ivimbela ukukhetha isithombe, isango lesango alikho. (I-Otto Nix yaseNingizimu Korea)
5) Umthelela omelana nomoya
Indawo yokubandakanya indwangu yendwangu ilayishwa ngomoya wensimbi yensimbi, ukwanda komthelela omelana nomoya .
--- Isigaba sobuchwepheshe:
1. Ukuhamba kwe-air
Ukuhlanganiswa kwesihenqo kufakwe insimbi yensimbi noma i-aluminium alloy wind and strip windpof ukwandisa umphumela wokumelana nomoya.
Ivezwe ngensimbi ehlanganisiwe futhi inhle, ihlala isikhathi eside futhi igqoke ukumelana. Ukusebenzisa ubuchwepheshe bokususa okuthuthukisiwe, ukwaziswa okuqinile, akulula ukubhula izinhlanzi, kuphukile
I-brush eyakhelwe ngaphakathi kwisitimela somhlahlandlela ingadlala indima yokungena enothuli futhi uphawu.
4. Iwindi yokubuka
Iphakathi lihlinzekwa ngefasitela elikhanyayo le-PVC elibonakalayo ngobubanzi be-1.2mm, okwenza kube nokuphepha kwezimoto nezimoto ukungena nokuphuma.
Uma unesithakazelo kumkhiqizo wethu, sicela uxhumane ngomusa kimi.
1. Iyiphi imininingwane yokukhokha?
I-pre-production deposit, ibhalansi ngaphambi kokuthunyelwa.
2. Yisiphi isikhathi sokudiliva?
Ngama-oda avamile, kuthatha cishe izinsuku ezingu-7 kuphela.
3. Kuthiwani ngewaranti yomnyango?
Sinikeza iwaranti yenyanga eyi-12 kuyo yonke iminyango nezesekeli. Uma izinga lomkhiqizo livela.
4. Uhlinzeka ngamasevisi we-OEM?
Yebo. Izinsiza ze-OEM kanye ne-ODM aziyona inkinga kithi.
5. Iyini inamba encane yokuhleleka?
Samukela i-1 isethi njengendlela yesampula.
6. Kuthiwani iphasela?
Ukukhishwa kweplywood noma amakhadibhodi, okufanelekile ukuhamba kolwandle noma ukuhamba emoyeni, ngokuvumelana nezidingo zakho.
Izigaba zomkhiqizo : Isango Eliphakeme Eliphakeme > Isivinini esiphezulu se-Stacking Door
Ikhefu le-PVC livule umnyango omkhulu wejubane Xhumana Nanje
I-Smart Auto Sensor Fold Up Door Xhumana Nanje
Isango elimisiwe elisheshayo elishayelayo / isango eliqinile lokuvala isikhala Xhumana Nanje
Isivinini esiphezulu sigxuma ngaphandle komnyango Xhumana Nanje
Ikhwalithi ephakeme kakhulu yokufaka iminyango yesigcawu Xhumana Nanje
Igalaji eliPhezulu lokuPhezulu lokuPhezulu Xhumana Nanje
Isango eliphakeme lokuphepha eliphansi lokuphepha Xhumana Nanje
I-High High Stacking Door Yokuphepha Xhumana Nanje
I-PVC High Speed ​​Belt Stacking Door I-Pvc Ibhande Eliqinile Ligcwalise I-Door Ukufakwa kwesigxobo sezintambo I-PVC High Speed ​​Stacking Shutter I-Automatic High Speed ​​Stacking Door I-PVC High Speed ​​Roll Up Door Flexible High Speed ​​Stacking Door I-PVC High Speed ​​Rolling Shutter Door